Uyifaka njani itephu ngokuchanekileyo
Izixhobo zofakelo: Ngee hoses, iirabha zokuwasha, iishawa, imijelo yamanzi, iintonga, iminqwazi yokuhombisa, njl. Amanyathelo okufaka: 1. Ukufakelwa kombhobho wesitya esinye xa kuthengwa itompu enye yokubamba, u ...
Zeziphi izibonelelo zophuhliso lweepompo zentsimbi engenasici
Kulula ukunyamekela. Xa kuthelekiswa nezinye izinto zekhitshi kunye nezixhobo zokuhlambela, iipompo zentsimbi ezingenasici ziya kuba lula ukuzicoca nokulawula, kwaye izinto zentsimbi ezingenanto zinemisebenzi ezinzileyo kwaye akukho lula. Isebenza kuphela ngezinto ezinesiseko seasidi, ukuba nje inakho ...
Ukucocwa kwetephu kunye nolondolozo
Amanyathelo okucoca nolondolozo lwetephu afaka la manqaku mathathu alandelayo: 1. Vula kancinci kwaye uvale kancinci Musa ukuyiguqula kakhulu itepu, vele uyiguqule ithi cwaka. Umbhobho wesinyithi wentloko yeshawari kufuneka ukwimo yendalo eyoluliweyo. Ukugoba kwikona efileyo, kunqande ...
I-SPOGA GAFA Expo yaMazwe ngaMazwe yeMpahla yezeMidlalo, iFenitshala yangaphandle kunye neeMpahla zeGadi
Sithathe inxaxheba kumboniso obubanjelwe eKöln, ngowona mboniso mkhulu weemveliso zangaphandle, ke sabonisa iimveliso zethu zeshawari yelanga kunye neefompo apho, sadibana nabathengi abaninzi abafuna ezi mpahla, ngakumbi ishawa yethu yelanga iyathandwa, sinoyilo lwethu. Njengobukhulu ...
Imbali yekholamu yeshawari
Iishawari zabucala zaqala ngenkulungwane ye-19, xa amanzi angena kwindawo yasekhaya. Kwaye ishawa yaqala ukusetyenziswa xa kugalelwa isityalo sokwakha. Kude kube lusuku oluthile, ngenxa yethuba lengozi, abantu bafumanise ukuba ishawa inokufana nemvula ukuba nefuthe eliqhelekileyo ...
Ubuhle bendalo obuye baba ngumkhwa
Ngophuhliso lweedolophu, kukho izakhiwo ezandayo eziphakamileyo. Baye bahlala kwindawo yendalo kwaye bandise umgama phakathi komntu nendalo. Ngokubuyisa ulwandle ukwakha iindlela, ukugawula amahlathi, njl., Siwenzile umgama phakathi kwabantu nendalo ...